Formstack: Wako Wenzvimbo Wemutengi Anotendeseka Vault | Martech Zone
China, June 28, 2012 Muvhuro, Ndira 1, 2018 Douglas Karr
Zvakaoma sesangano kushanda kuburikidza nevatengi pane dhata kunyoresa nyaya, domain zita rebasa nyaya, uye dzimwe nhoroondo account. Panzvimbo pekumirira kumberi neshure, misangano uye -kugovana-skrini, isu tinongowana zvese humbowo hwatinoda kubva kune vatengi vedu. Rudzi irworwo ruzivo haruna kunaka kuti ugare wakangotenderedza muemail kana mune zvinyorwa faira kumwe kunhu - saka tinoshandisa zvakanaka formstack panzvimbo.
Mumwe muenzaniso ndipo patiri kutamisa vatengi vedu kubva kune imwe yekubatira sevhisi kuenda kune imwe. Kuti zvinhu zvireruke, tinobata bata nyore fomu yekadhi ravo rechikwereti uye zvitupa zverejista, tobva taenda kunotenga iyo account pachinzvimbo chavo tovaita kuti vatamire pasina chinonetsa.
formstack inopa chikuva chakachengetedzeka zvakazara, uyezve inowedzera yekuwedzera login kuti uwane chero yakachengeteka data. Izvi zvinoreva kuti kunyangwe kana mumwe munhu akapinda munzira yangu formstack account, ivo havagone kuwana iyo yekuvimbika ruzivo vasingazive yekuwedzera password. Izvi zvinoita kuti tikwanise kuchengetedza matsamba munzvimbo yakachengeteka, kuishandisa pazvinenge zvakakodzera, uye kusafanira kunetseka nezvawo nguva yese yasara!
Kana iwe uri agency, taura neyedu tekinoroji inotsigira formstack kutanga yako account. Kana iwe uri kushanda nesangano, usatumira kiredhiti kadhi rako kana ruzivo rwekupinda kwavari kuburikidza neemail, fakisi, kana parunhare… vatore kuti vavake fomu rechiratidzo online paunogona kuisa ruzivo rwako.
Tags: masanganobokazvitupa zvevatengidomain registrar loginloginmasangano ekushambadzirapasiwedhipasswords
Sei Hukama Dhiraivha Revenue Webinar Series